कृत्रिम गर्भाधानबाट बच्चा जन्मियो – Click Khabar
कृत्रिम गर्भाधानबाट बच्चा जन्मियो
चितवनः चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पहिलो पटक कृत्रिम गर्भाधान विधिबाट बच्चा जन्माईएको छ । विगत १५ वर्षदेखि सन्तान हुन नसकेको भरतपुरको एक जोडीको कृतिम गर्भाधान विधिबाट आज छोराको जन्म दिएका हुन ।
अस्पतालका प्रसुती विभागका डा. रेनुका ताम्राकारका अनुसार गत वर्षको माघमा कृत्रिम गर्भाधान गराईएकोमा आज शल्यक्रिया मार्फत् बच्चा जन्माईएको हो । विगत १५ वर्षदेखि सन्तान हुन नसकेको जोडीको कृत्रिम गर्भाधान विधिबाट सन्तान प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त जोडीको एक पटक प्राकृतिक रुपमा गर्भ रहेको भए पनि उक्त गर्भ सफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि लामो समय सन्तान हुन नसकेपछि कृत्रिम गर्भाधान गराईएको हो । शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माईएको भए पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डा. ताम्राकारले जिल्लामा पहिलो पटक कृत्रिम गर्भाधान विधिबाट चितवन मेडिकल कलेजमा बच्चा जन्माईएको दावी गर्नुभयो । उक्त कलेजमा अन्य जोडीहरुको पनि कृत्रिम गर्भाधान गराईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलो प्रयासमा नै कृत्रिम गर्भाधान सफल भएको बताउनुभयो । बच्चाको बाबु आमाको चाहना अनुसार नाम गोप्य राखिएको छ ।
प्रसुती, रेडियोलोजी, एनेस्थेसिया, रेडियो डाईग्नोसिस र नर्सिङ विभागको समन्वय र अस्पतालका अध्यक्ष तथा प्रबन्धनिर्देशक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने, डा.आसुदीप शर्मा, प्रा.डा.गणेश दंगालको निरन्तरको मार्गनिर्देशनमा सफलता मिलेको अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकार निन्द्रमा छ, जनताले सरकारको महशुश गर्न पाएनन्ः महामन्त्री खड्का
हेटौडाका कोरोना सङ्क्रमित पुरुषको चितवनमा मृत्यु
संक्रमणको जोखिममा अस्पतालहरु
अबैध मृगौला प्रत्यारोपणको आरोपमा चिकित्सक सहित चार पक्राउ